SomaliTalk.com » 2011 » July » 18
Home » Archive Maalinta July 18th, 2011
Ururka SOSCENSA oo Qabtay Dood ku saabsan Shirka Wadatashiga Soomaaliyeed
Waxaa maanta lagu qabtay hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho dood ku saabsan shirka wadatashiga Soomaaliyeed ee lagu qaban doono dalka gudihiisa, kaasoo ay qabanqaabinayso xafiiska siyaasadda Qarammada Midoobay ee Soomaaliya (UNPOS). Doodda ayaa lagu soo bandhigay dhowr qodob oo ay ka mid ahaayeen: Yaa mudan in shirkaas ay qabanqaabiso? Yaa mudan inuu ka qaybgalo? Maxaase laga fili karaa inay kasoo...
Jaamacada Muqdisho oo gudi u magcawday abaaraha
Jaamacadda Muqdisho oo guddi u magacowday gurmadka barakacayaasha abaaraha ee Muqdisho soo gaaray Jaamacadda Muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha ka jira dalka Soomaaliya ayaa maanta u magacowday guddi ka shaqeeya gurmadka gargaarka abaaraha, waxaana guddigaas guddoomiye u ah Dr. Maxamed Xuseen Ciise(Liibaan) oo ah diiwaan-hayaha guud ee jaamacadda Muqdisho. Kulanka lagu magacaabay guddigan oo...
SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii| Casharkii IV-aad
Wixii ka horeeyey dagaal-waynihii I-aad ee dunida (1914-1918), Ingiriiska iyo Talyaaniga heshiis ayay ku ahaayeen qeybsiga dhulka Soomaaliyeed. Laakiin markii uu dagaalkii dhamaadey, sida aanu arki doono, waxaa is-beddeley hoggaankii siyaasadda dalka Talyaaniga. Waxaa markaas bilaabatey, guud ahaan in si xooggan uu khilaaf u soo kala dhex-galo aragtidii siyaasadeed ee labada dal. Taasi waxay dhalisey...
Shirkadda SKA oo la wareegtey hawlihii Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Waxaa Magaalada Muqdishi waayadaan ku soo qulqulayey Shirkado Shisheeye oo dhamaantood Howla ka fuliya Magaalada Muqdisho gaar ahaan Garoonka Diyaaradaha iyo xeradii xalane waxaana inta badan Shirkadahaas lagu tilmaamaa in yihiin kuwa markii hore ku yimid arrimo ganacsi ka dibna isku badeley kuwa Maletari iyadoo taasi ay jirto ayaa Goroonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho waxaa haatan la wareegey...